Ajụrụ m onwe m ajụjụ a afọ abụọ gara aga (mgbe ọ dị afọ 32).
Ebe m malitere ịmalite ịmụ asụsụ ọhụrụ site n’ịgba chaa chaa, ahụrụ m nsogbu atọ dị mkpa:
1. Ịkwalite okwu na nchekwa nke okwu ncheta
2. Enweghi oge maka ịmụ asụsụ mba ọzọ
3. Esi achọta ndị ọkà okwu maka ọdịdị asụsụ
Iji nweta ihe ka mma, m, dị ka onye ọ bụla ọzọ na-amụ asụsụ mba ọzọ, aghaghị idozi nsogbu ndị a.
Na mbido, amalitere m iji ụzọ kachasị mma nke ịgbasa asụsụ m site n’iji kaadịadị, ebe otu akụkụ edere m okwu ahụ n’asụsụ Bekee, ma n’akụkụ nke ọzọ ya nsụgharị ya. Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, enwetara m ọtụtụ narị kaadi kaadị, bụ ndị na-esiri m ike ibugharị. Mgbe nke ahụ gasịrị, ekpebiri m iji ngwa mkpanaka maka ihe dị mma, ma n’inyocha ngwaahịa ndị dị n’oge ahụ n’ahịa, enweghị m ike ịchọta ngwa dị mfe ma dịrị m mma.
N’ụzọ dị mma, enwere m ahụmịhe na-emepe ngwanrọ na achọrọ m ịmepụta ngwá ọrụ dị irè iji mee ihe. N’ịbụ onye na-akwado usoro arụmọrụ gam akporo, ejiri m onwe m malite ịmepụta nsụgharị mbụ nke LingoCard maka ama ama m na n’ime ọnwa ole na ole na mbido mbụ na kaadị asụsụ na otu nchekwa data (otu oche) dị njikere. Ka oge na-aga, enwere m ọchịchọ ime kaadị ndị nwere okwu okwu na ike ịmepụta data data na okwu ndị a na-ejikarị emekarị. Amalitere m ikwurịta nhọrọ mmemme na ndị ọkachamara ọkachamara maara ihe. Ụmụ okorobịa ahụ nwere mmasị n’echiche m, ebe ndị ahụ nwere mmasị na-esonyere ọrụ ahụ. Mgbe anyị mejuputara echiche ọhụrụ ndị a, anyị kpebiri na anyị agaghị akwụsị n’ebe ahụ ma mepụta ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ maka usoro abụọ arụmọrụ: Android na iOS. Anyị na-akwado ngwa anyị na Google Play na ụlọ ahịa Apple maka n’efu.
N’ime ọnwa ole na ole, ọtụtụ iri puku ndị mmadụ gburugburu ụwa malitere iji ngwa anyị, anyị anatawokwa ọtụtụ akwụkwọ ekele ekele, ihe ngosi nke mmejọ na echiche maka iwuli ngwaahịa ahụ nke anyị nwere ekele. N’ihi ya, anyị ejirila ihe omume zuru ezu na echiche ọhụrụ maka mmepe iji tinye anyị ruo afọ ole na ole ọbụlagodi.
Ka ị na-emikpu onwe gị na ebe ị na-asụ asụsụ, ị ga-aghọta na ọ dị mkpa ịnweta ngwa ngwa ngwa. Ọ bụ ike ịghọta ahịrịokwu na ahịrịokwu ndị na-eme ka okwu gị kweta maka mkparịta ụka na nsụgharị ọsọ ọsọ. Ya mere, anyị kpebiri idepụta kaadị nwere akara, ahịrịokwu na idioms. N’oge a, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ narị puku nke kris na ụdị okwu ndị dị mkpa na ahịrịokwu dị n’ime ngwa anyị.
Na-arụ ọrụ maka nsogbu nke enweghi oge ọmụmụ, anyị kpebiri ịmepụta ihe ọkpụkpọ egwu pụrụ iche nke ga-aza ihe ọ bụla edere na kaadị ọ bụla e kere na usoro a kapịrị ọnụ, mgbe ọ na-agbanwe n’etiti okwu mba ọzọ na nsụgharị ha. N’ihi ya, Bekee nwere ike mụta na ụzọ yiri nke na-ege egwu na ebe ọ bụla. Ugbu a, a na-enye ngwá ọrụ a ikike iji gee ntị banyere asụsụ 40-50 asụsụ mba ọzọ, dabere na ngwaọrụ na ikpo okwu ji. Echere m na n’oge ụfọdụ n’ọdịnihu dị nso, onye ọkpụkpọ anyị ga-enwe ike ịrụ ọrụ na asụsụ niile a maara.
Iji dozie nsogbu nke ịchọta ndị ọkà okwu nke ala maka mmekọ okwu ọnụ, anyị na-ekekọrịta ịmepụta netwọk mmekọrịta na ịmepụta algọridim pụrụ iche maka netwọk a iji jikọọ onye ọ bụla na onye amaala ma ọ bụ ọkà okwu ọkachamara.
Site na mwebata nke ngwaọrụ anyị niile na-amụ ihe, anyị ga-emepụta usoro mmụta mmụta mba ụwa maka ịmụ asụsụ mba ọ bụla site n’enyemaka nke ndị mba ọ bụla.